Fifehezana vahaolana (fitantanana)
Science Fomba fiasa siantifika
Fifehezana vetivety mifehy (mifehy amin'ny fanandramana)
Inona avy ny fanovana atao amin'ny fanandramana?
Ny fari-dàlana voafetra dia ny iray amin'ireo mpikaroka no mihazona tsy tapaka (fanaraha-maso) mandritra ny fanandramana. Antsoina koa hoe " fifandanjana tsy miovaova" na tsotra fotsiny izy io. Ny fari-pitantanana dia tsy ampahany amin'ny fanandramana (fa tsy ny fari-pahalalana mahaleo na miankina), fa zava-dehibe satria mety hisy vokany amin'ny vokatra. Tsy zavatra mitovy amin'ny tarika mpanara-maso izany .
Ny fanandramana nomena dia manana fari-pitantanana maro.
Zava-dehibe ho an'ny mpahay siansa ny miezaka ny mihazona ny fari-pahalalany rehetra afa-tsy ny fari-piadidiana tsy miankina. Raha miovaova ny fari-piainana amin'ny alàlan'ny fanandramana, dia mety hanilika ny fifandraisana misy eo amin'ny fari-piainana miankina sy tsy miankina. Raha azo atao dia tokony ho fantatra sy horaisina ary raketina ireo fari-pahalalana.
Ohatra azo ampiasaina
Ny Tempoly dia karazana fihenam-bidy mahazatra . Raha misy tsy tapaka ny hafanana mandritra ny fanandramana dia voafehy izany.
Ohatra hafa amin'ny fanovana voafetra dia ny habetsaky ny hazavana, ampiasaina foana ny karazan-java-bozaka toy izany, na ny hafanana tsy miovaova, na ny faharetan'ny fanandramana.
Common mis-spelling: mifehy ny variable
Ny maha-zava-dehibe ny fari-pifidianana
Na dia tsy azo refesina aza ny fanovana fanovana (na dia voarakitra matetika aza) dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny vokatry ny fanandramana. Ny tsy fahampian'ny fanaraha-mason'ny fanaraha-maso dia mety hiteraka vokatra diso na izay antsoina hoe "variables misafotofoto".
Ny fanamarinana ny fanaraha-maso fanaraha-maso dia mahatonga azy io ho mora kokoa hamokarana fanandramana sy hametrahana ny fifandraisana eo amin'ny fari-piadidiana tsy miankina sy miankina.
Lazao, ohatra, hoe miezaka mamantatra ianao raha misy vongan-dranomamy iray manana fiantraikany amin'ny fitomboan'ny zavamaniry. Ny fari-piadidiana tsy miankina dia ny fisiana na ny tsy fisian'ny vongan-dranomandry, raha ny fari-piainana miankina kosa dia ny haavon'ny zavamaniry na ny tahan'ny fitomboana.
Raha tsy mifehy ny habetsaky ny hazavana ianao (ohatra, manatanteraka ampahany amin'ny fanandramana amin'ny fahavaratra sy ny ampahany mandritra ny ririnina) dia mety hanimba ny valiny ianao.
Inona no fanaraha-maso mifehy?
Dingana manaraka ny fomba siantifika
Inona no ohatra momba ny fihanaky ny aretina?
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny vondrona azo alaina sy mifehy ny fanaraha-maso?
Ohatra azo ambaran'ny siansa
Ny dingana manaraka ny fomba siantifika
6 Dingana manaraka ny fomba siantifika
Fomba fanandramana mitaiza tsotra
Fitaovana siantifika momba ny siansa
Boky Top ho an'ny fahalalahana ara-kolontsaina: Etazonia
Kitiho ny Kitapo
Korn Biography sy Profile
10 Zava-misy momba ny zatovo mampiady herisetra - fampiatranojiana fampiasana zaza tsy ampy taona
Ma foi - Nanazava ny fomba fiteny frantsay
Ahoana ny fametrahana "Essuyer" (hanadiovana)
Ny zava-misy momba ny hoe Volana mainty hoditra no nanomboka
Vest-Style vs Back Inflation BCD: Pros sy Cons
Mandra-pahoviana no haka ny fametahana fitenenana?
Ny taonan'ny Perikles sy Periclean Atena
Bernard Hopkins - voatahiry ao amin'ny kilasy roa mavesatra
Tondron'ny tondra-drano sy ny antony mahatonga azy ireo
Jeografia ao Kiribati
Ireo hira tsara indrindra nataon'i Lionel Richie nanomboka tamin'ny taona 1980
Ny Z-Boys: Ny Tantaran'ireo Mpisava Lalana Skateboarding an'ny Dogtown
Ny tantaran'ny MP3
Ahoana ny fikarohana momba ny razambeny
'Gracias' sy ny teny hafa amin'ny hoe 'Misaotra'
West Point GPA, SAT sy ACT Data
Anisan'izany ny ankizy amin'ny fanao amin'ny mpanompo sampy
Ny fahasamihafana eo amin'ny anjely, ny demony ary ny fanahy